एक हजार वर्ष ऐतिहासिक पुरानो कचौराको मूल्य तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ! « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी । एउटा कचौराको सर्बाधिक बढी मूल्य कति होला ? ५ हजार १० हजार वा ५० हजार डलर ? पत्याउनै नसकिने मूल्यमा हङकङमा एउटा कचौरा तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा लिलाम भएको छ । त्यो पनि चुन ढुंगाबाट बनेको ।
चिनियाँ सांग राजवंशले प्रयोग गर्ने उक्त कचौरा लिलामीका क्रममा फोनमार्फत एक ब्यक्तिले तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा किनेको चिनिया समाचार संस्था सिन्सन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ ।
एक हजार वर्ष पुरानो यो कचौराको विशेष महत्व भएका कारण आँफुले यति ठूलो मूल्उ हाल्न तयार भएको उनले बताएका छन् । १३ सेन्टिमिटरको नीलो–हरियो रंगको कचौरा लिलामीका लागि १ करोड २० लाख डलरबाट शुरुवाती रकम तोकिएको थियो । २० पटकको बोल कबोलमा यो मूल्यमा बिक्री भएको हो ।
शरीरमा कुन ठाउमा भएको कोठीले के संदेश दिन्छ ? जानिराखौ !
जागिर खानको लागि हाकिम सँग वि’ताएको त्यो रात‘।
बाढी पिडितहरुको उद्धार र राहतमा कुनै कमजोरी हुन नदिन गृहमन्त्रीको निर्देशन
खुसीको खबर :-कोरियामा नेपाली मजदुरको तलब बढेर न्यूजतम २ लाख पुग्याे